धरहरालाई मास्क ‘लगाएर’ सुरु गरियो मास्क अभियान ! - dautarimedia.com
धरहरालाई मास्क ‘लगाएर’ सुरु गरियो मास्क अभियान !
सरकारले शनिबारबाट नेपाल मास्क अभियान सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा मेरो प्रतिबद्धता मास्क लगाउनु नै आजको आवश्यकता’ भन्ने मूल नाराका साथ अभियान सञ्चालन गरिरहेकाे छ ।
सुन्धारामा रहेकाे धरहरामा ‘म जिम्मवार नागरिक’ लेखेर बत्ती बाल्दै अभियानको थालनी गरिएकाे छ ।काेराेनाकाे जाेखिम थप बढिरहेकाे भन्दै सरकराले सचेतनामुलक मास्क अभियान थालेकाे हाे । मास्क अभियान साउन २३ गतेदेखि २९ गतेसम्म जारी रहनेछ ।
थप समाचार : बिहान उठेर धेरैजसो मानिसहरु दुध हालेको चिया पिउने गर्छन् । दुध चिया स्वादिष्ट त हुन्छ तर त्यति नै नोक्सानदायक पनि हुन्छ । यदि तपाईं तौल घटाउने योजनामा हुनुहुन्छ भने बिहान उठेर खाने खानालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । दुधको सट्टामा तेजपातको चिया पिउन आवश्यक छ । यसले तौल घटाउन आवश्यक छ । खाना, तरकारी आदिमा प्रयोग गरिने तेजपातको चियाले तौल घटाउन मद्दत गर्छ ।
विशेषज्ञका अनुसार तेजपातमा भरपुर मात्रामा पोषक तत्व पाइन्छ । यसमा एन्टी अक्सिडेन्ट, क्याल्शियम, सेलेनियम, आइरन, कपर र पोटाशियम पाइन्छ । यदि तपाईं हरेक दिन बिहान यसको चिया पिउँदा स्वास्थ्यमा धेरै फाइदा पाइन्छ । तेजपातको चिया बनाउनका लागि ३ वटा तेजपात लिने, यसमा एक चुट्की दालचिनी पाउडर, २ कप पानी, कागती र मह लिने । तेजपातलाई राम्रोसँग पखाल्ने र उमालेको पानीमा राख्ने । र यसमा दालचिनीको पाउडर मिसाउने । यसलाई १० मिनेटसम्म पकाउने र छानेर चिया पिउने गर्नुपर्छ । स्वादिष्ट बनाउनका लागि मह र निम्बु मिसाउन सकिन्छ ।
तेजपातको चियामा मेटाबोलिज्म बढाउने पदार्थ पाइन्छ । यसले शरीरमा अनावश्यक बोसोलाई पगाल्न मद्दत गर्छ । यसमा प्रोटिन र फाइबर पाइन्छ । दालचिनीले शरीरमा डिटोक्स गर्ने काम गर्छ । यसका साथै, यो चिया पिउने गर्दा चिन्ताको मात्रा कम हुन्छ । र तौल पनि कम हुन्छ ।
थप समाचार :हाम्रो शरिर रचनामा सर्वाधिक (६० – ७० प्रतिशत) हिस्सा ओगटेको, विभिन्न जैव–रासायनिक क्रियाहरुमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा संलग्न रहेको हाइड्रोजन र अक्सिजनका परमाणुहरुले बनेको यौगीन नै पानी हो ।हाड जस्तो कठोर अंगमा २२ प्रतिशत, दाँतमा १० प्रतिशत, छालामा २० प्रतिशत, मस्तिष्कमा ७५ प्रतिशत, माशंपेशीमा ७६ प्रतिशत, रगतमा ८३ प्रतिशत र सम्पूर्ण शरीरमा लगभग ७० प्रतिशत पानीको मात्रा छ । पानीलाई जीवनको घोलक भन्ने उपनामले पनि चिनिन्छ ।
विभिन्न जैव रसायीनिक तथा उपापचयी क्रियाहरुलाई चाहिने जलीय माध्यम उपलब्ध गराउने देखी यस्ता कृयाहरुमा आफैँ पनि संलग्न हुने, विभिन्न तत्वहरुको परिवहन गर्ने गराउने, रक्तचाप तथा शारीरको तापक्रम नियन्त्रण गर्ने, विषक्त पदार्थहरुको निष्काशनमा सहयोग पुर्याउने काम पनि पानी ले नै गर्दछ ।
एउटा बयष्क पुरुषको शरीरमा ५५ देखि ७० प्रतिशत र महिलाको शरीरमा ४५ देखी ६० प्रतिशत पानी हुन्छ । शारीरिक पानीको दुइ तिहाई हिस्सा कोषहरु भित्र हुन्छ भने एक तिहाई हिस्सा रगत र कोषहरुको वरिपरिको खाली ठाउँमा रहन्छ ।
शरीरमा पानीको सन्तुलन बनाई रहनका लागी लगभग दैनिक ३ देखी ५ लिटर पानीको आवश्यक पर्दछ । जस मध्ये ७०० मिलि पानी खानाको माध्यम भएर प्रवेश गर्दछ भने ३०० मिलि पानी शरीर भित्रै उत्पन्न हुने गर्दछ । बाँकी पानीको पुर्ति भने पानी पिएर नै गर्नु पर्दछ ।
यसैगरी हरेक दिन ४५० मिलि पानी छालाबाट उडेर ४०० मिलि पानी श्वास सँगै घुलेर १५० मिलि पानी दिशा सँगै मिसिएर र बाँकी पानी पिसाबको रुपमा बाहिर जान्छ ।पानी पिउनुका फाइदाहरुः:१) शरीरमा बोसो लाग्न नदिएर तौल नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउछ ।
२) उपापचयी क्रिया पश्चात जम्मा भएको युरीया, युरीक एसीड, क्रियाटिनिन जस्ता विषाक्त तत्वहरु, सोडियम, पोटासियम, क्यल्सियम, फसफोरस जस्ता इलेक्ट्रोलाईट (नुन) हरु र अन्य उत्पादहरुलाई निष्काशन गरी रक्त शुद्धिकरणमा सहयोग पुर्याउँछ ।३) छालाको सौन्दर्यलाई जिवन्त राख्दछ । माशंपेशी तथा स्नायुकोषहरु कार्यक्षमतालाई सुचारु राख्न मद्दत गर्दछ । कोषहरुमा हुने अक्सिडेटिभ स्टे«स निवारण गर्न सहयोग गर्दछ ।
Previous: समाचार प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य ज’टिल, पाइपबाटै खाना !
Next: पुरुषहरूका लागि खुशीको खबर लसूनको सेवनबाट सात स’मस्याहरु मुक्त !